को बन्लान् नयाँ आइजीपी ? आज बेलुकासम्म निर्णय हुने “ – Life Nepali
को बन्लान् नयाँ आइजीपी ? आज बेलुकासम्म निर्णय हुने “
काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को जिम्मेवारी अब कसको काँधमा जाला भन्ने चर्चा बढेको छ। हालका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले भोलि अवकाश पाउँदैछन्। ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी भोलि मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका खनालपछि प्रहरीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। नयाँ आइजीपी को बन्ने निर्णय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
तथापि आज बेलुकासम्म यसको निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ। आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ र यो बैठकले नयाँ आइजीपीको चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले अवकाश पाउन लागेका खनाल नेपाल प्रहरीका २६ औं महानिरीक्षक हुन्। अब बन्ने महानिरीक्षक २७ औं आइजीपी हुनेछन्। यस पटक बन्ने महानिरीक्षक डिआइजीबाट सिधै आइजीपी हुनेछन्। यसअघि भने एआइजीबाट बढुवा भएर आइजीपी बन्ने गरेका थिए। अहिले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने नियम छ । आइजीपी खनालले यही नियमअनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
अहिलेका बहालवाला एआइजीहरुको समेत खनालसँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनेछ र सबै एआइजीहरुले पनि खनालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यसैले यपटक डिआइजीबाट बढुवा भएर आइजीपी बन्नेछन् । खनालसँगै १८ डीआइजी र तीन एआइजीले अवकाश पाउँदै छन् । अहिले आइजीपीका मुख्य तीन दावेदार छन् – प्रदेश १ का डिआइजी ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिआइजी तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका डिआइजी सूर्यप्रसाद उपाध्याय । बरियता क्रममा ज्ञवाली सबैभन्दा माथि छन् ।
त्यसपछि क्रमशः लम्साल र उपाध्याय छन् । यी तीनै जना अहिलेका आइजीपी खनालकै ब्याजका हुन् तर उनीहरु वैकल्पिक भएकोले खनालले भन्दा ५ महिना ढिलो नियुक्ति पाएका थिए । यी तीनमध्ये उपाध्यायले डिआइजीमा अरु दुईले भन्दा ढिलो बढुवा पाएकाले उनको आइजीपी बन्ने सम्भावना कम छ । मुख्य दावेदार ज्ञवाली र लम्साल हुन् ।
यी दुईमध्ये पनि बरिष्ठताका हिसाबले नियुक्ति भएमा ज्ञवाली आइजीपी बन्नेछन् । यी तीनमध्ये जो आइजीपी भए पनि बाँकी २ एआइजी बन्ने सम्भावना बलियो छ । कूल एआइजीको दरबन्दी ३ जनाको भएकोले बाँकी २ सँगै अर्का एकजना एआइजी बन्नेछन् । अर्का एक एआइजीको लागि २०४९ को ब्याजका ५ जना दावेदार छन् । यी ५ मध्ये एकजना एआइजी बन्नेछन् । जो भावी आइजीपीको सबैभन्दा बलिया दावेदारसमेत हुनेछन् ।
हाल आइजीपीका दावेदार तीन डिआइजीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधि आगामी असार २४ गते पूरा हुनेछ र तीनैजनाले अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि नयाँ आइजीपी चयन गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला १ जना मात्र एआइजी बाँकी हुने भएकोले उनी आइजीपीका मुख्य दावेदार हुनेछन् । हाल २०४९ को ब्याजका ५ डिआइजीहरु शैलेश थापा, हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की र विश्वराज पोखरेल छन् । यीमध्ये जसलाई अहिले एआइजी बनाइनेछ उनै आगामी असार २४ पछि आइजीपीका मुख्य दावेदार हुनेछन् ।
Previous चीनमा रहेका नेपाली भन्छन -‘ट्वाइलेटको पानी उमालेर खाइरहेका छौं, सरकार हामीलाई लिन कहिले आउँछौ ?’
Next अब १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै सवारी चालकको अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिने पाउने !